Siyaasi caan ah oo DF ugu baaqay in xilka laga qaado Taliye Saadaq John! ⋆ Soomaaliweyn | Wararka Iyo Warbixinada Dalka | Somalia's Latest News
Home Wararka Siyaasi caan ah oo DF ugu baaqay in xilka laga qaado Taliye...
Siyaasi caan ah oo DF ugu baaqay in xilka laga qaado Taliye Saadaq John!
Xaalada Magaalada Muqdisho ayaa maanta cakiran waxaana qeybo ka mid ah ka socda banaanbaxyo ay dhigayaan dad u badan Bajaajlayaal, kadib markii saakay Magaalada Muqdisho lagu dilay midkamid ah wadayaasha Mooto Bajaajta iyo nin la sheegay in uu ahaa abtigiis oo la saarnaa Mootada.
Askari katirsan ciidanka booliiska gobolka Banaadir ayaa saakay Isgooska Howlwadaag waxa uu ku dilay wiil dhalinyaro ah oo wade ka ahaa mooto bajaaj iyo sidoo kale abtigiis oo mootada la saarnaa.
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka hadlay dhacdadan ayaa sheegay in habdhaqankan lagu dilayo dadka shacabka ah ay lasoo baxeen ciidanka booliiska uu yahay mid cusub oo la socda taliska cusub ee booliiska gobolka Banaadir.
Waxa uu sheegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur in Madaxda dowlada ku abaalmariyeen taliyaha booliiska gobolka Banadair nin uu sheegay in uu qaabilsanaa dowlada Shirqoolka iyo dilalka siyaasiyiinta.
Siyaasiga ayaa ugu baaqay Madaxda dowlada in xilka ka qaadaan Taliyaha booliiska gobolka Banadair Saadaq Joon sidoo kale awoodiisa loo soo celiyo taliyaha booliiska Federaalka.
Hoos ka Akhriso qoraalka uu soo saaray Cabdiraxmana Cabdishakuur warsame.
Marxuumkani Allaha u naxariistee waa wiil Bajaajle ah oo ay ciidanka Booliska toogteen isaga iyo ruux kale oo rakaabkiisa ahaa. Habdhaqankan waa mid ku cusub Booliska Gobolka Banaadir wuxuuna la socdaa taliska cusub.
Madaxda dalka iyaga ayaa si buuxda u qaadaya masuuliyada, maadaama ay xilka taliska Booliska Gobolka Banaadir ku abaal mariyeen ninkii u qaabilsanaa shirqoolada dilalka qorshayn ee siyaasiyiinta, awoodna u siiyeen in uusan hoos tegin, amarna ka qaadan Taliska Guud ee Booliska Federaalka. Si dhibka xal loogu helo, madaxda dawlada waxaan kula taliyanaa
1- In Gacanta lagu soo dhigo ragii wiilasha dilay, lana maxkamadeeyo.
2- In xilka laga qaado Taliyaha Booliska Gobolka.
3- In Taliyaha Booliska Federaalka awoodiisa loo soo celiyo.
4- In maleeshiyaadkii Xasilinta loo bixiyey ee Nabadsugida laga soo ganay, Booliskana lagu soo dhextuuray, dhaqan celin iyo tababar Boolis loo furo.
5- Si sharaf leh loo aaso ehelkoodana Magdhow la siiyo wiilasha la dilay.
Previous articleMaxuu Eng Yariisow ka dhahay bajaajlihii lagu dilay Muqdisho?
Next articleCiidamada ka wada tirsan DF oo maalintii labaad ku dagaalamaya Muqdisho
Trump oo dib u dhigay qorshe lagu musaafurin lahaa qoxooti Somali ku jirto
Xaaf oo weli ka biyo diidsan in uu la kulmo Wafdiga Dawlada Federaalka
Ciidanka Xooga oo Al-Shabaab kala wareegay deegaan muhiim ah